Created 07-11-2012 01: 00: 02
Akachinja 16-11-2012 03: 44: 30
Munyori: Alphasim / Virtavia https://www.virtavia.com
Murovedzi murwi multiple textures uye yokutevedzera. Quality aimbova payware zvino pachena. Zvinosanganisira tsika rinonzwika, tsika gauges uye dyidzana rakapotsa Cockpit uye 2D emadziro, zvimwe kanoni kushanda (ona readme.txt).
The Lockheed Martin / Boeing F-22 Raptor inzvimbo imwe chete, twin-injini yechishanu-chizvarwa chinogona kuendesa ndege inoshandiswa iyo inoshandisa teknolojia yekudzivirira. Yakanga yakagadzirirwa zvikuru semhepo yakakwirira yehondo, asi ine humwe hutano hunosanganisira pasi kurwisa, magetsi ehurumende, uye zviratidzo zvekushanda kwehuchenjeri. Lockheed Martin Aeronautics ndiye mukuru wekambani uye ane basa rehuwandu hwe airframe, zvombo zvehurumende uye gungano rekupedzisira re F-22. Purogiramu pamwe chete Boeing Defense, Space & Security inopa mapapiro, aft fuselage, kubatanidza kwepayoniki, uye maitiro ekudzidzisa.
The ndege akanga zvakasiyana-siyana akasarudzwa F-22 uye F / A-22 mumakore asati pamutemo kupinda USAF basa December 2005 sezvo F-22A. Pasinei munhu tichishanda uye anodhura kukura nguva, United States Air Force anoona F-22 vachishora chezvinonhuwira US tactical mhepo simba, uye anozviti kuti ndege ndiyo kuninipisa nechinhu anozivikanwa kana projected murwi. Lockheed Martin anoti kuti Raptor wacho Tikafunga namano, kumhanya, agility, zvakarurama uye ezvinhu ruzivo, pamwe muhondo nezvaanogona mhepo-kuti-mhepo uye mhepo-to-zvakohwewa, zvinoita yakanakisisa zvinonakisa murwi munyika nhasi. Air Chief Marshal Angus Houston, aimbova mukuru weAustralia Defence Force, muna 2004 kuti "F-22 chichava zvikuru Ndege Ndege nokusingaperi kuvakwa."
Kwemitengo iri ndege, kushaya zvakajeka mhepo-kuti-mhepo kurwisana mishoni nokuda pokumbononotswa wokuRussia uye Chinese wechishanu-rudzi anorwisa zvirongwa, US kurambidza Raptor zvinotengeswa kunze kwenyika, uye kuramba kukudziridzwa vakaronga isingadhuri uye zvikuru-chinja F-35 kwakaguma panodana kugumisa F-22 kugadzirwa. Muna April 2009, US Department of Defense zvinganaka kurega vakagovera zvirevo zvitsva, pasi Congressional mvumo, nokuti kwokupedzisira procurement ndwa pamusoro 187 operative ndege. The National Defense mvumo Act nokuda Fiscal Year 2010 waishaiwa mari mamwe F-22 kugadzirwa. Chokupedzisira F-22 akakungurutsa kure gungano mutsetse musi 13 December 2011 pamhemberero pana Dobbins Air Reserve Base.
Sezvo 2010 ari F-22 yave nematambudziko zvisingagadziriswi nematambudziko ayo mutyairi okisijeni gadziriro iyo pave nomumwe kwendege uye rufu mutyairi wendege. In 2011 zvikepe yakanga makateyiwa kwemwedzi mina asati pakutangazve ndege kushandiswa, asi mishumo okisijeni gadziriro nyaya zvakapfuurira. Muna July 2012, the Air Force akazivisa kuti hypoxia-zvakadai zviratidzo ruzivo rwacho hunonyengera vharafu ari vezvikepe 'kufurirwa repfuti; vharuvhu akatsiviwa uye kuchinja kuti filtration hurongwa vakanga vaita. (Wikipedia)
Downloads: 22 162